“Ragaa Baatoota Koo taatu.” H.D.B. 1:8 – Mana Kiristaanaa Ortodoks Tawaahidoo Itiyoophiyaaatti – WALDAA QULQULLOOTAA
May 27, 2020 /in Barumsa Amantaa, Lallaba, Tibbana /by EOTC Afaan Oromo
“Afuurri Qulqulluun isin irratti yeroo bu’etti humna ni fudhattu, Iyyaruusaaleem, Yihuudaa, Samaariyaa fi hanga handaara Addunyaatti ragaa baatoota Koo taatu” Jecha kana kan dubbate Gooftaa fi Fayyisaa keenya Iyyasuus Kiristoosi dha. Kan dubbates du’aa erga ka’een boodaa guyyaa afurtamaaf Duuka Bu’oota Isaa gidduutti argamuun sammuu isaanii isaaniif banuun kitaaba isaaniif erga ibseen booda gara abbaa isaatti yeroo ol ba’uutti dha. Egaa Gooftaa fi Fayyisaan keenya Iyyasuus Kiristoos Duuka Bu’oota Isaa waggaa 3 fi ji’a sadii isaan waliin ta’uun addunyaa hadhoofte kana sagalee isaatiin erga mi’eesseen booda isaanin immoo “Isin soogidda addunyaa ti” jechuun Isaa ni yaadatama. Kana bu’uura godhachuudhaan addunyaa cubbuun hadhoofte kana sagalee Isaan akka mi’eessaniif isin soogidda addunyaa kanaa ti. Anaafis ragaa baatota Koo taatu jedheeni. Gooftaan keenya Duuka Bu’oonni ragaa baatota Isaa akka ta’aniif dursanii waan gochuu qaban isaanitti himee ture. Innis “Kunoo, isa Abbaan Koo isin abdachiise isiniif Nan erga; Waaqa irraa humna hamma argattanitti Iyyaruusaaleem keessa turaa” Luq. 24:49 jechuun ragaa baatuu ta’uun dura sooma fi kadhannaadhaan Iyyaruusaaleem keessa turaa jedheeni. Sana booda, humna argattuu jedhee isaaniin abdachiise. Kana qofa miti, hamma Bitaaniyaatti isaan baasee harka Isaa mataa isaanii irra kaa’ee ni eebbiseen. Kana jechuun aangoo lubummaan isaan muudee osuma Isaan arganii gara samiitti ol bahe. “Iyyasuus, Inni isin biraa gara samiitti ol bahe Kun, akkuma amma itti gara samii ol bahuu Isaa argitan kanatti immoo, deebi’ee in dhufa.” jechuudhaan dhufaatiin Gooftaa Keenya Fayyisaa keenya Iyyasuus Kiristoos ifatti yookan haala nama hundumaaf mul’achuu danda’uun akka ta’e nu hubachiisa. Raajoonni sobduun bara keenya kana keessatti jiran “Gooftaan Mul’ataan naaf mil’atee yoom akka dhufu natti himeera.” jedhanii raagu. Kun raajii sobaa akka ta’e beekuu qabna. Guyyaa sana ilma namaa dhiisnee Ergamoonni Waaqayyoo iyyuu kan hin beekne akka ta’e Kitaabni Qulqulluu nuuf mirkaneessee jira. (Maat. 24:36, Maar. 13:32).
Egaawoo akkuma mata duree irraa hubannutti “Ragaa baatoota Koo taatu” jedhee isaanitti hime. Duuka Bu’oonni Gooftaa humna erga fudhataniin booda ragaa baatota isaa akka ta’aniif Kiristoosiin addunyaatti labsanii alagoota gara Kiristaanummaa akka fudhatan taasisan. Dursa garuu ofii isaanii Kiristoosin fudhatanii, amananii qaama isaanii taasifatanii jiru. Gara ragaa bahuutti deemuun duras soomaa fi kadhaannadhaan Iyyaruusaaleem kan taate Mana Kiristaanaa keessa turuun humna argatanii jiru. Sana booda beela, dheebuu, goodaansa, gidiraa hundaa fi du’a osoo hin sodaatin Kiristoosin addunyaaf labsanii jiru. Kana jechuun Duuka Bu’oonni fi Abboonni Duuka Bu’oonni Kiristaanummaa Labsanii nuun kan ga’an sagaleedhaan qofa osoo hin taanee jireenya isaanii guutuu kennuudhaani. Egaa wal harkaa fuudhinsi kun nu bira yeroo gahu ni gaha akka waan jedhamee dhaloota dhufuuf dabarsuu dhiisnee kan keenya kan ta’e, ofuma keenyaa ceepha’aa, ofuma keenyaa maddii dhaabbannee harka itti reebaa, akka waan nu hin ilaallannee taajjabdoota taane hafne.
Ka’uumsa mata duree keenyaa irratti “Iyyaruusaalem, Yihuudaa, Samaariyaa, hanga handaara addunyaatti ragaa baatota Koo taatu.” kan jedhu yeroo ilaallu
Iyyaruusaalem:- Maatii fi Naannoo Mana Kiristaanaa namoota jiran (maatii Mana Kiristaanaa waan ta’aniif)
Kana jechuun haadha, abbaa, obboleessa, obboleettii, haadhaa manaa ijoollee, firoota keenya nu waliin jiran, hojjattoota keenya illee ni dabalata jechuu dha. Ofii keenya fayyinee namoota kanneen biroos fayyisuu osoo dandeenyuu nuti garuu waa tokko raawwachuuf yaalii illee hin goonu. Nuti shakkii amanuu dhabuu hagam akka dabarsine lapheen keenya ni beeka. Kanaafuu laphee guutuun amannee ofii keenyas fayyinee maatii keeenya fayyisuun nu irraa eegama.
Maatii keenya barsiisuuf Kitaaba Qulqulluu fi Qabsuura Qulqullootaa dubbisuun haa eegallu.
Gara Mana Kiristaanaa Deemuun sirna Qiddaaseee akka hordofan affeeruu
Foonii fi dhiiga Isaa akka fudhatan taasisuu.
Fil. 1:1-3, 2ffaa Moot. 5፡1-13, Yoh. 1:45
Yihuudaa:- Ollaa fi Iddoo hojii
Naanoo hojiitti haasawa cubbuuf nama affeeru haasawuu dhiisuu
Dilbata kan baranne iddoo hojii fi mana baruumsatti hiriyyoota keenya barsiisuu
Kitaaba akka dubbisan affeeruu fi maal akka irraa argatan gaafachuu
Garraamummaa jaalalaa fi afuuraan karaa jibbiinsii fi xiiqii hin qabneen gaggeeffamuu 1ffaa Xim. 1:19
Walumaa galattii jireenya keenya hundaan mana yookan maatii keenya biraa kaasee hanga addunyaa guutuutti ragaa baatota Kiristoos ta’uun nu irraa eegama. Duuka Bu’oonni Gootfaan keenya Iyyasuus Kiristoos waan isaan barsiise waan Isa irraa argatan gidiraa fi darara mootota addunyaa kanaa osoo hin sodaatin onneee fi laphee isaanii guutudhaan Afuura Qulqulluu irraa kennaa argatan fayyadamuun kan arganii fi dhagahan ragaa ba’anii jiru. “ Nuti kan dhageenyee fi kan argine ragaa ni baana” (H.D.B. 4:20) Eegaa hundumti keenyaa akkuma Duuka Bu’oota humna akka argannuuf Iyyaruusaaleem keessa turuutu nu irraa eegama. Sana booda akka Duuka Bu’oota Ragaa baatoota Isaa taana. Waaqayyo Gooftaan hanga dhumaatti Iyyaruusaaleem kan jedhamte Mana Kiristaanaa Keessa akka jiraannu nu haa gargaaru.
http://eotcmk.org/ao/wp-content/uploads/mk-logo-header-ao.png 0 0 EOTC Afaan Oromo http://eotcmk.org/ao/wp-content/uploads/mk-logo-header-ao.png EOTC Afaan Oromo2020-05-27 17:11:262020-05-27 17:11:45“Ragaa Baatoota Koo taatu.” H.D.B. 1:8
Amma garuu Kiristoos warra du’an hundaaf angafa ta’ee du’aa ka’eera”... Yeroo lama kan koo taate